‘अन्डा शाकाहारी नै रहेको बिज्ञानको निष्कर्ष’ – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /रोचक/‘अन्डा शाकाहारी नै रहेको बिज्ञानको निष्कर्ष’
कुखुरी पहिले जन्मियाे कि अन्डा ? यो प्रश्न अहिलेसम्म अनुत्तरित नै छ। अब अर्को प्रश्न थपिएको छ, अन्डा शाकाहारी कि मांशाहारी ?हामी यस प्रश्नमा धेरै अलमलिन्छौं । किनभने यो आफैंमा मासु जन्य होइन।
वा मासु जस्तै कुनै सग्लो शरीर काटकुट गरिएको होइन। तर, यसको स्रोत भनेको कुखुरी नै हो। साथसाथै अन्डा, जसबाट चल्ला पैदा हुन्छ।अन्डा चल्लाको स्रोत मात्र होइन । मिठो खान्की पनि हो। अन्डाको थरीथरी परिकार बन्छ। मासु नखानेहरुले समेत अन्डा खाने गरेको पाइन्छ।
कतिले भने यसलाई मांशाहारीकै कोटीमा राख्ने गर्छन्। त्यही कारण उनीहरु मासु जस्तै अन्डा पनि खाँदैनन् । उनीहरुको तर्क हुन्छ कि, अन्डा भनेको कुखुराले दिने हो। यसले गर्दा यो ननभेज हो। तर, यस्तै तर्क गर्ने हो भने, दुधलाई पनि त ननभेज भन्नुपर्ने।
किनभने यो पनि जनवारले दिने हो।अब तपाईं भन्नुहुन्छ कि, अन्डाबाट बच्चा पैदा हुन्छ। तर, बजारमा पाइने अन्डा अनफर्टिलाइज्ड हो। अर्थात् त्यसबाट कहिले पनि चल्ला पैदा हुँदैन। हुनै सक्दैन।अब भने यो विवादलाई विज्ञानले सफाइ दिएको छ। विज्ञानले भन्छ, अन्डा शाकाहारी नै हो। रिसर्च अनुसार अन्डाको सेतो भागमा केवल प्रोटिन हुन्छ। त्यसमा मासुको कुनै अंश हुँदैन।
रौतहटमा अचम्म! कसरी अचानक भासियो शिवलिङ्ग जमिनमुनि? ​स्थानीय डराए
कुकुरले किन विजुलीको पोल, भित्ता, टायरहरुमा पिसाब किन फेर्न खोज्छ ?